Budata PMPlayer maka Windows
Free Budata maka Windows (27.00 MB)
PMPlayer bụ ngwa mgbasa ozi dị mfe na enweghị malware. Ekele maka mmemme a na ị nwere ike na-agba ọsọ na ngwaọrụ gị na sistemụ arụmọrụ Windows, ị nwere ike igwu faịlụ mgbasa ozi ngwa ngwa ma dị ike ngwa ngwa.
Na-akwado usoro vidiyo kachasị mma na nke kachasị elu, PMPlayer gụnyere ọtụtụ atụmatụ mara mma. Nigosipụta na njirimara ya dị ka mgbakwunye ndepụta okwu akpaka, mmemme ahụ na-akwado ffdshow, ihe nzacha LAV na ihe nzacha nnwere onwe MPC-HC. Enwere m ike ịsị na ọ nwere interface dị mfe, nke bụ otu nime uru ya dị mkpa. Ka anyị ghara ichefu na PMPlayer, nke ị nwere ike iji maka ebumnuche dị iche iche, na-akwadokwa ọtụtụ ụdị windo. Nke kachasị mkpa, ịnwere ike ibudata ya nefu, nagbanyeghị na ọ na-enye gị ohere iji ya nọtụtụ ụzọ.
Windows XP, 2003, Server, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 10.1 (32-bit & 64-bit)
Direct X 9.0 na nelu
60MB nke nchekwa
Nha faịlụ: 27.00 MB
Kacha ọhụrụ na: 24-11-2021
Site na Winamp, otu nime ndị egwuregwu mgbasa ozi kacha amasị na nke ejiri eme ihe nụwa, ị nwere...
8K Player bụ ọkpụkpọ vidiyo nke ị nwere ike iji na kọmputa kọmputa gị. Na 8K Player, nke nwere...
Spotify, otu nime ihe kachasị amasị egwu na-ege ntị maka ogologo oge, na-arịọ ka ụdị egwu dị iche...
Lite Lite nke Winamp, nke anyị maara kemgbe ọtụtụ afọ, bụ obere ihe ọzọ ọkachasị maka ndị na-eji...
iTunes, onye mgbasa ozi mgbasa ozi na onye njikwa nke Apple maka Mac na PC mepụtara, ebe ị nwere...
MusicBee, nke pụtara netiti ọtụtụ ihe ọkpụkpọ egwu ọzọ nwere atụmatụ ya siri ike yana ọdịdị pere...
RealPlayer Cloud bụ ngwa nchekwa igwe ojii ahaziri maka ndị ọrụ na-echekwa vidiyo. Ị nwere ike...
PMPlayer bụ ngwa mgbasa ozi dị mfe na enweghị malware. Ekele maka mmemme a na ị nwere ike na-agba...
QuickTime Player, na-aga nke ọma media player mepụtara Apple, bụ mmemme na-adọta uche na ya larịị...
Alloy Light bụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi siri ike nke ị nwere ike iji dị ka ihe ọzọ na Windows Media...
CherryPlayer bụ ihe bara uru, ntụkwasị obi na nke efu emebere ka ọ kpọọ ụdị faịlụ ọdịyo na vidiyo ọ...
MediaMonkey bụ onye njikwa egwu dị elu na onye ọkpụkpọ maka ndị ọrụ iPod na ndị na-anakọta egwu dị...
Zoom Player MAX bụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi dị mma ma nwee ike ịhazi ya maka kọmpụta nwere sistemụ...
AVI Media Player, dị ka aha na-egosi, bụ a free media player na-enye gị ohere ịkpọ video faịlụ na...
Ọtụtụ ihe dị na ibe ndị ị gara mgbe ị na-achọgharị ịntanetị na-echekwa na kọmputa gị ruo nwa oge....
Ace Stream bụ usoro mgbasa ozi ọgbọ ọhụrụ nke gụnyere ngwaahịa dị iche iche na azịza maka ma ndị...
GOM Audio bụ ihe ọkpụkpọ egwu dị mma, ntụkwasị obi na enweghịkwa nke emebere ka ị kpọọ / kpọọ faịlụ...
BSPlayer bụ ọkpụkpọ mgbasa ozi ama ama nke nwere ike ịkpọ faịlụ ọdịyo na vidiyo niile dịka AVI,...